ကတ္တား၏ Black Hole အဘယ်အရာခဲ့သလား
ကတ္တား၏ Black Hole
ဝိန်း Fort ဝီလျံရဲ့လုံမရဏအကျဉ်းထောင်
အဆိုပါ "ကတ္တား၏ Black Hole" ကတ္တား၏အိန္ဒိယမွို့၌ဝိန်း Fort ဝီလျံအတွက်အလွန်သေးငယ်သောထောင်ထဲမှာဆဲလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂျွန်ဇေဖနိ Holwell အဆိုအရ ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ , ဇွန်လ 20, 1756 ရက်နေ့တွင်, ဒ Nawab ဘင်္ဂလား နေ့ချင်းညချင်းကတော့ airless အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှ 146 ဗြိတိန်သုံ့ထောင်ကျ - အခနျးနောက်တစ်နေ့နံနက်ဖွင့်လှစ်သောအခါ, (Holwell အပါအဝင်) သာ 23 ယောက်ျားနေဆဲခဲ့ကြသည် အသကျရှငျ။
ဤဇတ်လမ်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ် Savage အဖြစ်အားလုံးအင်ဒီးယန်းဂရိတ်ဗြိတိန်မှာလူထုအမြင်ရောင်, နှင့် Nawab, Siraj-ud-daulah ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေမှဦးဆောင်နှင့် extension ကိုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
သို့သော်ဤပုံပြင်ကိုပတျဝနျးကငျြအများကြီးအငြင်းပွားဖွယ်ရာလည်းမရှိ - ထောင်ထဲမှာသိပ်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးသိုလှောင်မှုဂိုဒေါင်အဖြစ်ဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့များကအသုံးပြုခဲ့ကွောငျးအမှန်တကယ်တည်နေရာခဲ့သော်လည်း။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်မရှိခေတ်ပြိုင်ရင်းမြစ်များအစဉ်အဆက် Holwell ရဲ့ပုံပြင် corroborated - နှင့် Holwell ကတည်းကအလားတူအငြင်းပွားစရာသဘောသဘာဝသည်အခြားဖြစ်ရပ်များ fabricating ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ကောင်းသည်မိမိအကောင့်တစ်ခုမျှသာချဲ့ကားသို့မဟုတ်လုံးဝသည်သူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏တစ်ဦး figment ပါပြီစေခြင်းငှါ positing, တိကျမှန်ကန်မှုကိုသံသယ။
18 ပေ 24 ခြေရင်းနားမှာအခန်း၏ရှုထောင့်ပေးထားကြောင်းအချို့ကအပြုသဘောဆောင်ကအာကာသသို့အကြောင်းကို 65 အကျဉ်းသားများကိုထက်ပိုမိုပြွတ်သိပ်ဖြစ်နိုင်ပါပြီမဟုတ်ပေ။ အခြားသူများကအများအပြားသေဆုံးခဲ့လျှင်မူကား, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မလွှဲမရှောင် Howell နှင့်သူ၏ကျန်ရစ်သူသင်္ဘောသားလေထုကိုကယ်တင်ဖို့အခြားသူများကိုလည်ပင်းညှစ်ခဲ့မဟုတ်လျှင်န့်အသတ်အောက်စီဂျင်, တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုမှုမဟုတ်, တစ်ပြိုင်နက်လူတိုင်းအသတ်ခံခဲ့ကြလိမ့်မယ်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
က "ကတ္တား၏ Black Hole" ၏ပုံပြင်ကိုအမှန်တကယ်ကျူးဘားဆိပ်ကမ်း, Tonkin ဆူပူမှု၏ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ putative လက်နက်များအတွက်တိုက်မိန်း၏ "ဗုံးခွဲမှု" နှင့်အတူ, သမိုင်းရဲ့အကြီးအ Scan ကိုတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၏အမှန်တရား, ထိုလုလင် Nawab Plassey ၏တိုက်ပွဲမှာလာမည့်နှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့ရသည်နှင့်ဗြိတိသျှအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအိန္ဒိယတိုက်ငယ်အများစုထိန်းချုပ်ယူဆ, နေရာအဖြစ် "ကတ္တား၏ Black Hole" ၏အသုံးချအဆုံးသတ် အဘို့ စစ်အကျဉ်းသား ။
ဗြိတိသျှ Nawab သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်သူတို့ရှေ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာစတိုးဆိုင်တစ်ခုဂိုဒေါင်အဖြစ်ထောင်ထဲမှာတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပါမယ် 1756 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကွောငျးအခြို့သော 70-ထူးဆန်းတပ်ဖွဲ့များမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတစ်ဦး obelisk ကာလကတ္တား, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သင်္ချိုင်းအတွင်းစိုက်ထူခဲ့သည်။ အဲဒါကိုတွင်သူသည်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်အောင် Howell ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်သောသူတို့၏အမည်များကျောက် immortalized နေကြသည်။
တစ်ဦးကပျော်စရာ, လူသိနည်းတဲ့လျှင်တကယ်တော့: ကတ္တား၏ Black Hole အတူတူပင်၏နာမတော်အဘို့အလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေမည် , နေရာလွတ်ချဉ်ကြော်ဒေသများ မှာအနည်းဆုံးနာဆာ astrophysicist ဟောင်ကောင်-ရီ chiu အရသိရသည်။ သောမတ်စ် Pynchon ပင်သည်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်မခွဲခြားသောအရပ်ဖျောပွထားသ "Mason ဆို & Dixon က။ " အဘယ်သူမျှမကိစ္စငျသညျဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရှေးခေတ်ထောင်ထဲမှာမှတ်ဘယ်လိုကြောင့်၎င်း၏ပိတ်သိမ်းကတည်းကရောနှောလူထုပုံပြင်များနှင့်အဆိုရှင်မှုတ်သွင်းထားပါတယ်။
Genghis Khan က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ Long ကမတ်လကဘာလဲခဲ့သလား
ဂရိ Warrior Achilles ကလေးများဖူးသလား?
ဂျပန်အတွက်ဓား Hunt ကအဘယျသို့ခဲ့သလား
ရှေးခေတ်ရောမသမိုင်း: ပုဗလိ Terentius သာ. ကောင်း၏တာရိန်းစအဖြစ်လူသိများ, Afer
Timeline ကို: Zheng သူနှင့်ရတနာရေယာဉ်စု
ဖိလစ်ပိုင်အတွက် Hukbalahap ပုန်ကန်
မာတင်လူသာကင်းနေ့အဘို့ 8 Printout လှုပ်ရှားမှုများ
အဘယ်ကြောင့် Inner City လူငယ် PTSD သည်းခံကြ
High School တွင် Classes ရဲ့အတွက်အသုံးပြုနည်းရှိတ်စပီးယား၏အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်
စိန့် Scholastica ၏ဂုဏ်အတွက်တစ်ဦးကဆုတောင်းပွဲ
တစ်ဦး dit အမည်ကဘာလဲ?
Plug vs. တုရုမြို့ပြုပြင်ခြင်း Patch
ကို '80s ၏လုပ်ငန်းသီချင်းများမှာထိပ်တန်းအမျိုးသားများအတွက်
Theseus နှင့် Hippolyta
အဆိုပါထိုးစစ်အပေါ်အော်တိုမန်အင်ပါယာ: 1300 - 1600 - ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ Timeline ကို
Shoegaze ဂီတ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile
ဘယ်လိုဧကရာဇ် Qin ရဲ့ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုစစ်သားအဖြစ်ခဲ့
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Guadalcanal ၏တိုက်ပွဲ
'' Tal '' အသုံးပြုခြင်း
Delphi အတွက် string အမျိုးအစားများ (Beginners များအတွက် Delphi)
သင်ကပန်းချီက Canvas ကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်နှင့် Object ကိုမေးခွန်းများ
ဤရွေ့ကား, 10 Birds ဂိမ်းဟာဒေါအဖြစ်သေအဖြစ် Are
1854 လောက်မှာ Published ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း '' Walden, '
ရိုးရာမွန်း-မျက်မှောက်နေဖြင့်ရမ်ဇာန်လမြတ်၏ Start ကိုအဆုံးအဖြတ်
အိန္ဒိယ Harmonium အရင်းအမြစ်များ